यौनेच्छा भएपछि महिलाले देखाउने व्यवहार यस्ता छन्
२०७६ साउन २१ मंगलवार
१. महिला अनपेक्षितरुपमा तपाइँको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाइँलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन् ।
२. यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उत्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्छ । कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको संवेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन् । ३ यदि कुनै पनि स्त्रीले तपाइँसँग एकान्त होस् भन्ने चाहेको अनुभव गर्नु भो वा धेरै समय तपाइँसँग विताउन चाहेको बुझ्नु भो भने उनी के चाहन्छिन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
४. स्त्रीले शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहेमा उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छन् । अधिकाँश महिलाको अनुहारमा पनि यो चाहाना भएको कुरा रंगको परिवर्तनले झल्किन्छ । अनुहार रातो हुने वा तापक्रम बढ्ने यस्ता समान्य लक्षण हुन् ।
५. यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।
कट्रिनाकी बहिनी पनि बलिउडमा आउदै
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफकी बहिनी इसाबेल कैफपनि बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेकी छन् । इसाबेललाई सुपरस्टार सलमान खानले बलिउडमा लन्च गर्न लागेका हुन् ।सलमानले आफ्ना बहिनी ज्वाई आयुष शर्मा र इसाबेललाई लिएर नयाँ फिल्म क्वाथा बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो फिल्म सत्य घटनामा आधारित हुने बताइएको छ ।
यो फिल्म भारतीय सेनाको कथामा आधारित हुने बताइएको छ भने यस फिल्ममा आयुष सैनिकको भूमिकामा हुने छन् । यस फिल्मलाई करण भुटानीले निर्देशन गर्ने भएका छन् । आयुषले यस अघि लभयात्री फिल्मबाट बलिउडमा डो्यु गरेपनि सो फिल्म बक्स अफिसमा त्यति सफल भने हुन सकेको थिएन ।
रामायणमा ऋतिक र दीपिका
मुम्बई (एजेन्सी) । बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता ऋतिक रोशन र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले सँगै स्क्रिनसेयर गर्ने भएका छन । उनीहरूले हिन्दू पौराणिक कथामा अधारित चलचित्र रामायणमा एकसाथ काम गर्ने भएका हुन् । चलचित्र मेकर नितेश तिवारी र रवि रड्यावरले रामायण बनाउने तयारी गरिरहेका छ ।
थ्रीडीमा निर्माण हुने यस चलचित्रमा ऋतिक रोशन र दीपिका पादुकोणले स्क्रिन शेयर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । यस विषयमा औपचारिक घोषणा भने गर्न बाँकी छ । चलचित्रमा ऋतिक भगवान राम र दीपिका सीताको भूमिकामा प्रस्तुत हुने समाचारमा उल्लेख छ । नितेश तिवारीले रामायणको लागि ऋतिकलाई अफर गरेका थिए ।
रामायणमा ऋतिक काम गर्न तयार भएका छन् । चलचित्र मधु मटेनाले निर्माण गर्ने भएका छन् । ऋतिक अभिनित चलचित्र सुपर ३० अहिले भारतसँगै नेपाली हलहरूमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । साथै यो चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ ।
राती १ बजेसम्म अनलाईन बैठक,केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्दै नेकपा
काठमाडौँको नयाँ बसपार्कस्थित ग्यारेजमा राखिएको ८ वटा माइक्रोबसमा आगलागी
देउवाले ओलीलाई साथ देलान् ?